एउटै क्लवबाट धेरै गोल गर्ने खेलाडीको सूचीमा पेलेपछि मेस्सी — Sanchar Kendra
एउटै क्लवबाट धेरै गोल गर्ने खेलाडीको सूचीमा पेलेपछि मेस्सी
एजेन्सी । बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले ब्राजिलियन लिजेन्ड पेलेको रेकर्ड बराबरी गरेका छन् । अर्जेन्टिनी स्टार मेस्सीले पेलेको एउटै क्लबबाट सर्वाधिक धेरै गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमानमा बराबरी गरेका हुन् ।
सन् २००४ मा सिनियर टोलीबाट डेब्यू गरेका मेस्सीले बार्सिलोनाबाट ६४३ गोल गरेका छन् । पेलेले ब्राजिलको क्लब सान्टोसबाट ६४३ गोल गर्दै एउटै क्लबबाट सर्वाधिक धेरै गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका थिए ।
शनिबार भ्यालेन्सियासंग २–२ को बराबरी खेल्दा मेस्सीले बार्सिलोनाबाट एक गोल गर्दै पेलेको कीर्तिमान बराबर गरेका हुन् । उता प्रिमियर लिग फुटबलमा क्रिस्टल प्यालेसले लिभरपुलसँग लज्जास्पद हार ब्यहोरेको छ ।
शनिबार राति भएको खेलमा रोबर्टो फिर्मिन्हो र मोहमद सलाहाले दुईदुई गोल गर्दै लिभुरपुललाई ७-० को फराकिलो जित दिलाए । क्रिस्टलको घरेलु मैदानमा लिभरपुलको जितमा अरू तीन गोल तकुमी मिनामिनो, साडियो माने र जोर्डन हेन्डरसनले गरे ।
जितसँगै शीर्ष स्थानको लिभरपुलले तालिकामा ६ अंकको स्पष्ट अग्रता लिएको छ । पराजित क्रिस्टल भने १७ अंकसहित तालिकाको १४औँ स्थानमा छ । यस्तै रोबर्ट लेवान्डोस्कीको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा बुन्डेस लिगामा जित निकाल्दै बायर्न म्युनिख शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ ।
शनिबार बायर लिभरकुसनको मैदानमा बायर्नले घरेलु टोलीलाई २–१ गोल अन्तरले हराएको हो ।बायर्नको जितमा दुवै गोल रोबर्ट लेवान्डोस्कीले गरे । ४३औँ मिनेटमा बराबरी गोल फर्काएका उनले दोस्रो हाफको ईन्जुरी समयमा विजयी गोल गरेका थिए ।
खेलमा अग्रता प्याट्रिक स्किकको गोलमा घरेलु टोली लिभरकुसनले लिएको थियो । जितसँगै बायर्न म्युनिखले शीर्ष क्लब बायर लिभरकुसनलाई शीर्ष स्थानमा उछिनेको छ । बायर्नको ३० अंक छ । पराजित लिभरकुसनको २८ अंक छ ।
खेलकुद सँग सम्बन्धित
स्कुल कलेजहरु कम्तीमा तीन साता बन्द गर्न सिफारिस, दियो यस्तो कडा निर्देशन
बाहिरियो पत्रकार महासंघको अन्तिम नतिजा, कसकाे मत कति ?
विभूषणमा नयाँ नक्सा समावेश नगरेको भन्दै चौतर्फी बिरोध भएपछि गृहले दियो यस्तो स्पष्टीकरण
नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै, २४ घण्टामा कति थपिए ?
मेयर कप क्रिकेटको उपाधि एपीएफलाई
पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा पोखरेल विजयी
प्रधानमन्त्रीलाई २० हजार जरिवाना, यस्तो छ कारण